Nahazo fahazoan-dàlana hiasa amin'ny sidina mankany Alemana ny seranam-piaramanidina Rosiana Aeroflot sy S7
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Nahazo fahazoan-dàlana hiasa amin'ny sidina mankany Alemana ny seranam-piaramanidina Rosiana Aeroflot sy S7
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Talohan'izay dia nahita fahasahiranana tamin'ny fahazoana fahazoan-dàlana hisidina eo anelanelan'ny firenena ireo kaompaniam-pitaterana rosiana sy alemanina ary voatery manafoana ny sidina aza.
Aeroflot dia mahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny manampahefana misidina fiaramanidina alemana hisidina mankany Alemana
Nahazo fahazoan-dàlana ilaina ihany koa ny S7 Airlines
Nanambara i Lufthansa fa nahazo fahazoan-dàlana rehetra ilaina amin'ny sidina Russia
Nilaza ny Tale Jeneralin'ny vondrona Aeroflot ao Russia fa nahazo alalana tamin'ny tompon'andraikitra fiaramanidina alemana i Aeroflot mba hampandeha sidina eo anelanelan'ny Federasiona Rosiana sy ny Repoblika Federalin'i Alemana.
“Milamina ny zava-drehetra, nahazo alalana izahay,” Aeroflot Nilaza ny Chief Executive, ary nanampy fa misy sidina 28 isan-kerinandro ao anatin'ny fandaharam-potoana fahavaratra.
Mandritra izany fotoana izany ny serivisy ho an'ny mpanao gazety faharoa lehibe indrindra any Russia, ny S7 Airlines, dia nilaza fa nahazo ny fahazoan-dàlana ilaina ihany koa ny kaompaniam-pitaterana.
“Nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny manampahefana Alemanina ny S7 Airlines hampiasa sidina. Ny sidina mankany Alemana dia hampiasaina araka ny kasaina hatao, ”hoy ny fanambaran'i S7.
Vao maraina Lufthansa nanambara fa nahazo ny fahazoan-dàlana rehetra ilaina amin'ny sidina Russia avy amin'ny manampahefana misahana ny fiaramanidina rosiana.
Talohan'izay dia nahita fahasahiranana tamin'ny fahazoana fahazoan-dàlana hisidina anelanelan'ny firenena ny kaompaniam-pitaterana rosiana sy alemana. Tsy maintsy nofoanan'ireo mpitatitra aza ny sidina.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra alemanina, ny olana dia mifandraika amin'ny tsy nanomezan'ny alàlan'ny sidina federaly rosiana ara-potoana ny sidina orinasa alemanina tamin'ny volana jona. Miorina amin'ny fifandimbiasana dia tsy navelan'ny manampahefana fiaramanidina alemana ny sidina orinasa rosiana.